I-Apple yethula amathuluzi amasha wonjiniyela ukukhuthaza izinhlelo zokusebenza | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 17/09/2021 12:00 | Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone, Izaziso
Ukusabalalisa okuhle kohlelo lokusebenza olwenziwe yi- Onjiniyela kuyisihluthulelo sokuphumelela kunoma yisiphi isitolo sohlelo lokusebenza. Inani elikhulu lezinye izindlela, izinhlelo zokusebenza nezinketho zenza kwesinye isikhathi ukugxila kokulahleka kulahleke phakathi kwezinhlelo zokusebenza eziningi. Kungakho i-Apple ibifuna ukusiza onjiniyela bayo ngokwenza i- Ingosi yamathuluzi onjiniyela ukuze baphromothe izinhlelo zabo zokusebenza. Izinketho kuze kube manje bezisuselwa ku-QR, izixhumanisi ezimfushane kanye nelogo ye-App Store. Noma kunjalo, amathuluzi amasha avumela i- dala izakhiwo zangokwezifiso nokubukwa kohlelo lokusebenza ngakunye ukukhuthaza ukwethulwa, ukunikezwa, okubhaliselwe, nezibuyekezo.
Nakhu ukuthi amathuluzi amasha wonjiniyela wokusabalalisa izinhlelo zokusebenza anjalo
Manje usungadala kalula imikhankaso yokuthengisa yangokwezifiso, efana namabhanela nezithombe, ukwazisa izinhlelo zakho zokusebenza ezinkundleni zokuxhumana nokuningi. Vele ukhethe uhlelo lwakho lokusebenza, ukhethe isifanekiso, wenze ngendlela oyifisayo ukwakheka kwakho, bese ufaka imilayezo esethwe ngaphambilini ngezilimi eziningi. Imiklamo yakho izotholakala ngokushesha kubo bonke osayizi abafanele, okwenza ukwaba kube lula kunakuqala. Ungaqhubeka nokusebenzisa amathuluzi wokumaketha we-App Store ukudala izixhumanisi ezimfushane noma amakhodi okushumeka aholela ekhasini lakho lomkhiqizo ku-App Store futhi ubonise isithonjana sohlelo lwakho lokusebenza, ikhodi ye-QR, noma ibheji ye-App Store.
Lesi isimemezelo esisemthethweni se-Apple sethuluzi laso elisha ukudala imiklamo ebonakalayo ukukhuthaza izinhlelo zokusebenza ku-App Store. Ukuqala, vele ufake ifayela le- iwebhu elandelayo bese uthayipha uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo. Okulandelayo, kuzokhonjiswa imenyu lapho singakhetha khona uhlobo lomklamo esifuna ukuwenza: uhlelo lokusebenza olusha, ukunikezwa, ukubhaliswa noma ukuvuselelwa. Ngokuya ngokuthi sikhetha ini, umbhalo ochazwe ngaphambilini yi-Apple uzohambisana nedizayini.
Kulokhu sisebenzise i-Apple Music njengesibonelo futhi sikhethe i-'New App 'ngakho isiqubulo sithi:' Uhlelo lokusebenza olusha! Yilande. ' Olandelayo, sikhetha ulimi esifuna ukuthi ngayo imibhalo ivele futhi senza ngokwezifiso ukwakheka phakathi kokukhethwa kukho okuthathu: mhlophe, mnyama noma luhlaza okwesibhakabhaka. Ngayinye yale mibala ihlotshaniswa nesizinda esenziwe ngokwezifiso nesimibalabala esengeza ukuthinta ekwakhiweni.
Ekugcineni, sizokwazi ukufinyelela ekulandweni kwemiklamo ngezindlela ezahlukahlukene. Ukusuka ezigcawini zokuthunyelwe kwezokuxhumana nabantu kuya kumabhanela wewebhu kuya kuzindaba ze-Instagram. Le miklamo ingalandwa yonke ndawonye futhi umphumela uyinto enjengale kubo bonke osayizi bayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » I-Apple yethula amathuluzi amasha wonjiniyela ukukhuthaza izinhlelo zokusebenza
Izitolo eziku-inthanethi zivaliwe! Esikhathini esingaphansi kwamahora amabili ukubhuka kokuqala kokuqala kwe-iPhone 13 ne-iPad